Nwa akwukwo Fabinho Akụkọ nke oma
Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Nwa akwukwo Fabinho Akụkọ nke oma
LB na-akọ akụkọ nke a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara "Mr pụrụ ịdabere". Anyị Fabinho Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye na-atụ egwu nke etiti. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-atụle Fabinho's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Victor Moses Child Child Story Plus Ihe omuma ihe omuma
Akụkọ Fabinho nke Childhoodmụaka - Mmalite na Ndụ Ezinụlọ:
Malite, ọ dịghị Fabinho dị n'aha ndị mụrụ ya nyere ya. N'ihi ya, aha ya bụ Fábio Henrique Tavares. Fabinho ma ọ bụ Mr Reliable bụ onye a maara na amụrụ ya na 23 nke ụbọchị Ọktoba 1993 na nne nne gbara ọchịchịrị Brazil, Rosangela Tavares (onye bụbu onye nhicha) na nna ọcha Brazil, João Roberto Tavares (onye ọrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe) na Campinas, São Paulo, Brazil . Foto dị n'okpuru bụ nne na nna ya mara mma.
A mụrụ Fabinho nwa ihere na ọdụdụ n'ime ụmụ atọ. Dị ka nwa ikpeazụ a mụrụ nke ezinụlọ Tavares, Fabinho nwere nsogbu nke ukwuu. Ya na ụmụnne ya ndị okenye tolitere na obodo mara mma nke Brazil nke Campinas bụ nke a maara maka ahịhịa ndụ ya na ala pụrụ iche nke nwere mmasị n'ịgba bọl.
Maka Fabinho, otu ihe doro anya n'oge ọ bụ nwata. Ihe dika nwatakiri obula mgbe o bu nwata ka o choro ibu ndi n'adiri egwu. N'ikwu nke a, ha enweghị njedebe na Fabinho mgbe ebe football nọ n'ụkwụ ha.
Fabinho Untold Biography Eziokwu - Mmalite Ọrụ:
Fabinho malitere ịgba bọl na-asọmpi n'ụlọ akwụkwọ mgbe ọ dị afọ 7. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, ya na otu egwuregwu ntorobịa ya, Paulínia FC gbara. Foto dị n'okpuru ebe a bụ nwa agbọghọ Fabinho na ndị otu ya.
A hụrụ Fabinho iji nweta mkpebi siri ike n'oge na-adịghị anya. E mesiri nke a ike mgbe onye nkụzi Paulinia Erick Martins kwuru nrara ọ raara onwe ya nye ya, ntinye onwe ya, ịdọ aka ná ntị na ịme ihe. Ọbụna nne na nna ya na nna ya bụ Roberto na-emesi obi ike na, site na nwata, nwa ya na-ebido ịkụ football. N'ụlọ akwụkwọ na n'ụlọ nzukọ ndị ntorobịa ya, onye ọ bụla kwuru na ya nwere nkà, ọ na-enwe mgbe niile ike na nkà nke onye ọkpụkpọ.
N'oge na-adịghị anya, Fabinho malitere ịme egwuregwu futsal nke o mere ruo afọ 12 tupu ịtụle ịga ọkachamara. Ikpe mbụ ọkachamara ya nwere na usoro ndị ntorobịa Fluminense.
Fabinho Biography Eziokwu - Mmalite Ọrụ:
Ọchịchọ Fabinho nwere maka football hụrụ ya mgbe ọ nwesịrị ule na-aga nke ọma, debanye aha ya na otu ìgwè ndị ntorobịa nke Fluminense, nke nyere ya ohere iji gosipụta talent ya ọzọ.
N'ụlọ ntorobịa, Fabinho zutere Marcelo onye nọ n'akụkụ ntorobịa nke klọb. Otu n'ime ndị ọzọ Brazil bụ Richarlison onye bụ nwa ya.
Mgbe ọ nọrọ afọ ntorobịa ya, ibuli elu karịa ndị ntorobịa nọ na klọb Fabinho ka a kpọrọ ndị otu mbụ na 20th nke May 2012. Ebe ọ bụ na ọ dị ezigbo mma, Fabinho gosipụtara na Brazil tupu ọ pụọ Europe ka ọ kpọọ Rio Ave na Portugal . Na akaụntụ ya banyere oku ọ na-akpọ na Europe, nna ya kwuru;
“N'ikpeazụ, Chineke gọziri mgbalị ya ma tinye ezigbo ụlọ ọrụ ntorobịa n'ụzọ ya. nwa m nwoke nwere nkà, ọ rụsiri ọrụ ike maka nrọ nke ịbụ onye na-egwu bọl na ọ na-aghọrọ mkpụrụ ”
Nne Fabinho Rosângela da Silva Tavares chetakwara oku mmetụta uche ya na Europe. Na akaụntụ ya;
“Mgbe ọ nụrụ ka ọ na-agwa nna ya okwu mgbe a kpọchara ya na Europe. Ahụrụ m na ọ dị oke mkpa nye ya na anyị ezinụlọ ya. Ọ bụ ezigbo obi ụtọ, metụrụ na anya mmiri ”
Eziokwu na-adịghị mma Fabinho - Nzute na Jorgie Mendes:
Mgbe ya na Rio Ave na Portugal na-egwu, Fabinho zutere onye na-ahụ maka egwuregwu football, Jorge Mendes onye ghọrọ onye na-enye ya ndụmọdụ na onye ọrụ ndụmọdụ.
Aha Joao Moutinho nke nwatakiri n'akwukwo nke oma
Mendes a maara na ọ bụ ọrụ maka inyere ọtụtụ ndị na-asụ Portuguese egwuregwu aka C Ronaldo, Jose Mourinho ma na-enwe ọganihu na nnukwu klọb.
Mkpebi Mkpebi Ahụike: N'agbanyeghị na ọ bụ onye ọkpụkpọ ọkpọ, Fabinho nyere ndụmọdụ ọkachamara site n'aka onye na-elekọta ya ka ọ sonyere Real Madrid Castilla (Real Madrid otu B) nke ọ na-atụ anya ga-eme dị ka ebe dị mma iji bulie ọrụ ya. Nke ka mkpa bụ na ọ gwara onye ahịa ya Jose Mourinho bụ onye jisiri ike na Real Madrid, nwee olile anya na ọ ga - enyere Fabinho aka ịbanye na ndị otu Madrid.
Fabinho rubere isi Jorge Mendes'Achọrọ m isonyere ndị otu mmepe Castilla. Ọ gbagoro n'elu ọkwa nke Madrid wee banye n'ime ndị otu egwuregwu Madrid ebe ọ na-ezube ịda mba n'ihi Jose Mourinho nwetara oge ahụ.
Naanị ọdịdị Fabinho maka Real Madrid bịara Malaga mgbe o nyere ya Angel Di Maria dị ka enyemaka nke dugara na mmeri egwuregwu ahụ. José Mourinho onye nọ na njedebe ịbụ onye a chụpụrụ enyeghị Fabinho ohere ọ chọrọ. Mara onye ahịa ya Jose Mourinho ga-ahapụ ụlọ ọgbakọ Spanish Jorge Mendes kwetara na mkpebi ịgbazinye ego na Monaco bụ nke mechara bụrụ ihe na-adịgide adịgide.
Na Monaco, Fabinho nwere mkpebi siri ike iji mee ka nrọ ya mezuo na ọchịchọ ya ịghọ onye kachasị mma n'ọkwá ya abụghị ihe na-agafe agafe. Na klọb, ọ mere onwe ya ka ọ bụrụ onye na-elekọta ụlọ nchebe dị mma nke hụrụ ụlọ klọb n'etiti Mourinho Manchester United na-alụ ọgụ maka nnweta ya. Ọ jụrụ Mourinho'United wee gaa Liverpool. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Fabinho, Rebeca Tavares Hụrụ Ndụ Ndụ:
N'azụ onye ọ bụla Brazil na-agba ọsọ, ọ nwere nnukwu nwanyị, ma ọ bụ ya mere okwu ahụ na-aga. N'azụ Fabinho, enweela nwa agbọghọ mara mma nke bụ nwunye ya ugbu a. Rebeca Tavares, nke gosipụtara ịhụnanya nke ndụ ya n'okpuru bụ nwunye Fabinho.
Fabinho na nwunye ya na-adọrọ adọrọ Rebeca Tavares. Rebeca lụrụ Fabinho na 2015 mgbe ha gbakọtara na 2013. Ndị hụrụ ha n'anya na-enwe ike igosipụta ịhụnanya ha ma chọta oge iji nọrịa.
Dị ka ihe ndị enyi na ndị ezinụlọ si kwuo, mmekọrịta ha mere ka ha bụrụ ezigbo ndị enyi na ezi ịhụnanya.
Fabinho na-ele ya anya dị ka nsọpụrụ ị ga-ewere nwanyị n'ebe ọ bụla ọ chọrọ ịga ahịa. Maka Fabinho, ịzụ ahịa na-ere ahịa. Ya “Anyị na-aga anyị zụta anyị na-ahapụ” ịzụ ahịa abụghị ụdị na Rebecca. Maka Rebeca, e nwere ụlọ ahịa ma ọ bụ abụọ nke pụtara n'ezie ihe nye ya
Alex Sandro Nwa akwukwo n'akwukwo nke oma
Dabere na Instagram, Rebeca na-ebi ndụ mara mma na Fabinho. Ọ na-enwe mmasị ịdebe nwoke ya nwoke ọtụtụ ezumike site na ezumike pụrụ iche. Nke a bụ nke New York.
Rebeca mara mma nke na-adọrọ mmasị n'omume na Alicia Keys bụ arụsị ya. Ọ hụrụ nwoke ya n'anya na-akpọrọ ya gaa n'ebe ndị mara mma dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru ebe a.
Holidaysmefu ezumike na ọzara Arabian nwere obere ebe pụrụ iche n’obi ya n’ihi ịnọrọ onwe ya na ịma mma nke okike. Ọzara jupụtara n'ọtụtụ ihe omume maka ma ndị hụrụ ịhụnanya n'anya.
Emmanuel Adebayor Child Story Plus Akwụsịghị Echiche Eziokwu
Ụbọchị Valentine bụ karịa ememe maka ndị di na nwunye hụrụ n'anya igosi na ha hụrụ ibe ha n'anya.
Fabinho Untold Biography Eziokwu - Social Media amaghị:
N'oge ederede, ibe Liverpool Twitter nwere nde mmadụ 10.4. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị Liverpool ọ bụla na-arụ ọrụ na akaụntụ Twitter ha ma e wezụga Fabinho. Nwunye ya Rebeca Tavares ekwuola n'otu oge na ya ga-agbatịkwu aka iji soro ndị agha Liverpool na-akpakọrịta na Twitter bụ ndị chọrọ ịnwe mmekọrịta na onye Brazil.
Ọ gakwara n'ihu ọha iji kọwaa amaghị nke a na mgbasa ozi mgbasa ozi nke di ya na akaụntụ nke aka ya. N'okwu ya;
“Ee ee, nke a bụ Twitter m. Fabinho esoghị m n'ihi na ọ maghị etu Twitter si arụ ọrụ ya mere o nwere onye ga-enyere ya aka na nke ahụ ma eleghị anya onye ahụ amaghị na m bụ nwunye ya. "
Chọta tweet n'okpuru;
Fabinho dị ka n'oge ederede ugbu a nwere ụmụazụ 94.4k ndị na-enweghị ike ịhụ ya tweet n'onwe ya. Dabere na onye Brazil…
“Enwere m [twitter] abụọ ma ọ bụ atọ gara aga mana naanị m jiri ya iji hụ hashtags ma ọ bụ akụkọ. mana m chere na Twitter dị mma karịa Instagram n'ihe gbasara mmekọrịta na ndị Fans. Onwe m, Instagram na-ahọrọ m. ”
Nwa akwụkwọ Fabinho akụkọ nke na -Ndụ Ezinụlọ
Fabinho sitere na agbụrụ ezinụlọ na-ahụ n'anya. Ugbu a na England, Fabinho na-ebi na nwanne ya nwanyị na nwanne nwanne ya nke na-elekọta ihe omume football ya. Nrọ ya bụ ka ezinụlọ ya dị nso. Otú ọ dị, ndị mụrụ ya; João Roberto (nna) na Rosângela (nne) nwere mmasị ịnọ na Campinas, Brazil.
Dị ka mama ya si kwuo;
“Obi na-eru m ala na nwa m nwanyị nọnyeere ya. Anyị na-aga kwa afọ ma soro ya nọrọ ihe dị ka ọnwa atọ tupu anyị alaghachi Brazil. ”
Mgbe nne na nna Fabinho bịara ileta, ụlọ ya jupụtara na ọ funụ na obi ụtọ. Fabinho hụrụ n'anya iri anụ Lasagna nke mama ya kwadebere.
Mgbe ọ bịarutere England, Rosângela na-ewekarị ọtụtụ nri Brazil ma ọ kwụsịghị ịkwadebe osikapa, agwa na anụ anụ maka nwa ikpeazụ ọ mụrụ na onye na-azụ ezinụlọ Tavares.
Nwa akwụkwọ Fabinho akụkọ nke na -Agent Bobby
Roberto Firmino enwetala aha 'Agent Bobby'na nkwenye nke mgbalị aghụghọ ya iji kwenye na onye Brazil bụ Fabinho onye si na Monaco gaa Liverpool. Dabere na Firmino...
"Fabinho gwara m okwu mgbe anyị na-egwu egwuregwu na mba. Ka oge na-aga, ọ na-akọrọ m ezigbo mkparịta ụka banyere Liverpool na ngwa ngwa, m na-agbanye bọtịnụ "
Firmino nwere ọrụ maka ịkọwa Fabinho, ụzọ ndụ na Liverpool, ebe kacha mma ị ga-ebi, otú ụlọ ọrụ ahụ si arụ ọrụ, otú ndị obodo nọ. Nke kachasị mkpa, ọ nyeere Fabinho aka iji nweta ụlọ ịzụta. Nye ọtụtụ Fans, Firmino bụ Jorgie Mendes ọzọ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụAnyị Fabinho Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.